Fahatongavan’ny Papa François :: Hiara-hiasa amin’ny Zandarimaria amin’ ny lafiny fiarovana ny Amerikana • AoRaha
Fahatongavan’ny Papa François Hiara-hiasa amin’ny Zandarimaria amin’ ny lafiny fiarovana ny Amerikana
Fantatra nandritra ny fihaonan’ny Masoivohon’ny Etazonia, Michael Pelletier sy ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena na ny Seg, teny amin’ny toby jeneraly Ramarolahy Philibert Betongolo, omaly, fa: “vonona hiara-hiasa amin’ny Zandarimaria amin’ny fitandroana ny filaminana amin’ny fahatongavan’ny Papa François eto Madagasikara amin’ny 6 septambra ho avy izao ny Amerikana”.
« Hisy hatrany ny fifandrasaina tsy tapaka amin’ny masoivoho amin’ny fampitana vaovao, fa indrindra mandritra ny fitsidihan’ny Papa François eto amintsika. Voakasika izy ireo amin’ny fitandroana ny filaminana satria mifanakaiky ny toerana hivantanan’ny Papa François sy ny toeram-ponenan’ireo diplaomaty amerikana sasany », hoy ny fanazavana avy eo anivon’ny Sekretariam-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, taorian’ny fihaonana, omaly.
Niresaka momba ny mety ho fifanampiana eo amin’ny fitandroana ny filaminana sy ireo teratany amerikana miasa sy monina eto ihany koa ny roa tonta. « Niaiky io diplaomaty amerikana io fa efa azo tsapain-tanana ny ezaka fampandriana fahalemana tato anatin’ny enim-bolana farany. Maniry izy ireo mba ho tazonina hatrany io ezaka io indrindra ho an’ny any amin’ny faritra atsimo », hoy hatrany ny fampitam-baovao.
Fahatrarana olon-dratsy Sarona ireto andiana mpangalatra môtô
Toeram-ponenana eny Ivato Hatomboka ato ho ato ny fanorenana an’ireo Trano mora